थप चार जना थारू महिला सांसद बन्ने – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
थप चार जना थारू महिला सांसद बन्ने
२०७४, ८ पुष शनिबार ०३:५१
काठमाडौंँ । नेकपा (एमाले) बाट थप चारजना थारु महिला सांसद् बन्ने करिब पक्कापक्की भएका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र थारु कोटासमेत कायम भएपछि थारुको सांसद् हुने सङ्ख्या सुनिश्चित भएको हो ।
एमालेबाट कैलालीकी चुनकुमारी चौधरी र लक्ष्मी चौधरी सांसद् बन्ने पक्का भएको हो । चुनकुमारी प्रदेशसभा तर्फको सांसद बन्न लाग्नुभएको हो भने लक्ष्मी प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक कोटामा आउने करिब पक्का भएको छ ।
चुनकुमारी कैलालीको गेटा ५, बरबट्टामा कमैया परिवारमा जन्मनुभएकी एमाले नेतृ हुनुहुन्छ । उहाँ २०५९ सालदेखि एमालेको सदस्यता लिएर अहिले एमाले कैलालीको जिल्ला सदस्य र जलस्रोत ऊर्जा विभागकी इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ । कैलाली ४ को महिला विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएकी उहाँ पहिलो पटक सांसद हुन लाग्नुभएको हो ।
त्यस्तै, लक्ष्मी धनगढी ६, जाली गाउँका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ । यसअघि बालाराम भट्टराई नेतृत्वको स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगमा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी लक्ष्मी पनि पहिलो पटक समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्न लाग्नुभएको हो ।
पहिलो पटक सांसदको भूमिकामा आउन लागेकोमा निकै खुशी लागेको र पछाडि परेका वर्गको हितमा काम गर्ने लक्ष्य रहेको चुनकुमारी चौधरीले बताउनुभयो । प्रदेश ७ को प्रादेशिक राजधानी थारु समुदायलाई पायक पर्ने ठाउँका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता आफूले जनाएको बताउँदै उहाँले मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउनुभयो ।
सोहीअनुसार दाङबाट पूर्वसांसद् शान्ता चौधरी र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएकी पूर्व सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौंवा समानुपातिक सांसद बन्ने पक्कापक्की हुनुभएको छ । शान्ता चौधरी यसअघि संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिकी सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरी चर्चामा हुनुहुन्थ्यो । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङबाट पराजित चौधरी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसदको जिम्मेवारीमा आउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, २०४८ सालमा एमालेको सदस्यता लिएर पछि थरुहट आन्दोलनमा होमिनुभएकी गङ्गा चौधरी सत्गौंवाले एमाले छाडेर २०६५ सालपछि थरुहट तराई पार्टी नेपालमा आबद्ध हुनुभएको थियो । पछि सो दलमा पनि विवाद भएपछि २०७३ पुस ८ गते आफ्नै नेतृत्वमा थरुहट तराई पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
केही समयपछि नै उहाँले आफ्नो दललाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालमा समाहित गराउनुभयो । भट्टराई नेतृत्वको सो दल लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि सत्गौंवाले सो दल छाडेर निर्वाचनअघि दाङको एक कार्यक्रमबीच एमालेमा फर्कनुभयो । श्रीमान र श्रीमती दुवैजना एकसाथ एमालेमा प्रवेश गरेका सत्गौंवालाई एमालेले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको थियो । उहाँको श्रीमान नन्दकुमार चौधरीलाई एमालेले दाङ जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा राखेको छ ।
आफू एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सांसद बन्ने पक्कापक्कीजस्तै भएपछि सत्गौंवा निकै खुशी अनुभूति भएको बताउनुभयो । आफू सुरुदेखि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट हुर्किए पनि केही समय थरुहट मुद्दामा लागेर बाटो विराएको बताउनुभयो । थारु र पछाडि परेका वर्गको माग सम्बोधनका लागि पनि बलियो दलको आवश्यकता महसुस गरेर आफू पुनः पुरानै घरमा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो । यसपछि आफूले एमालेमै रहेर थारु, मधेसी तथा पछाडि परेका वर्गको मुद्दाको वकालत गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले सुनाउनुभयो । एमालेमा पुनः फर्केको छोटो समयमै सांसदको जिम्मेवारी पाउनेमा सत्गौंवा भाग्यमानी सांसदका रूपमा हेरिनुभएको छ । समानुपातिकको एक नम्बरमा नाम रहेको डा. विजयसुब्बा समेत सांसद हुनबाट वञ्चित हुने परिस्थितिका बेला महिला भएका कारण सत्गौंवाले सो पद पाउन लाग्नुभएको हो ।
साभार : गोरखापत्रअनलाइन